News Collection: हवाइजहाजमा रोएँ
काठमाडौं, कात्तिक १६ (नागरिक)- तीन महिना लामो विदेश भ्रमणपछि अभिनेत्री ऋचा घिमिरे केही दिनअघि नेपाल फर्किएकी छिन्। आफ्ना पति शंकर घिमिरेसहित उनी अस्ट्रेलिया, इङल्यान्ड र स्कटल्यान्ड पुगिन्। शंकरद्वारा निर्देशित र आफूद्वारा अभिनित नया" फिल्म 'वीरताको चिनो' प्रदर्शन गर्न उनले भ्रमण गरेकी हुन्। लामो समयको घुमघामलाई उनी यसरी स्मरण गर्छिन्।
१. छरितो काम
विदेशीको काम कति छरितो छ भन्ने अनुभव अस्ट्रेलियाको भिसा लिने बेला नै गर्न पाएँ।
हामीलाई आयोजकले एक हप्ताअगाडि मात्र खबर गर्‍यो, जबकि भिसा प्रक्रिया पूरा हुन एक महिना पनि लाग्न सक्थ्यो। त्यसपछि हामी तेस्रो दिन नयाँ दिल्ली गयौं र त्यहाँको अस्टे्रलियाली दूतावासले २४ घन्टामै भिसा दियो। यस्तो छरितोपन नेपालमा किन छैन?
२. हवाइजहाजमा रोएँ
सिड्नीको शोपछि अस्ट्रेलियाको अर्को सहर पर्थमा जाँदा हवाईजहाजमा पाँच घन्टा उड्नुपर्‍यो। हवाईजहाज एकदम साधारण थियो। न त सिटपछाडि मनिटर थियो न त कुनै म्यागेजिन नै। शंकरजी चाहिँ हवाईजहाज उड्ने बित्तिकै निदाउने गर्नुहुन्छ। म हतपत निदाउँदिन। त्यो लामो यात्रा यति पट्यारलाग्दो भएछ कि मेरा आँखाबाट आँसु थामिएन।
३. नेपालमा पनि फिल्म बन्छ र?
पर्थमा त्यहाँको स्टेट लाइब्रेरी युनिभर्सिटीको प्रेक्षालयमा साउन ३० मा 'वीरताको चिनो' प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यहाँ लगभग एक सय नेपाली भेला भएका थिए। नेपालीबाहेक केही स्थानीयहरूले पनि चासो देखाएको पाएँ। उनीहरूमध्ये कतिले नेपालमा पनि फिल्म बन्छ भन्ने कुरा पहिलोपटक थाहा पाए। मैले नेपालमा वार्षिक ४०-५० वटा फिल्म बन्ने कुरा सुनाउँदा उनीहरू छक्क परे।
४. अस्ट्रेलियामा आधुनिकता, बेलायतमा नेपालीपन
अस्ट्रेलियाका नेपालीहरू एकदम आधुनिक पाएँ। उनीहरूको लवाइखवाइ सबैमा त्यो झल्किन्थ्यो। बेलायतमा चाहिँ नेपालीपन देखेँ। प्रायः सबैका घरमा मादल झुन्डिएका पाइन्छ। त्यस्तै विभिन्न चाडपर्वमा आ-आफ्ना जातीय पहिरनमा सज्जिने प्रवृत्ति पनि बेलायतमा देखियो। जातीय रूपमा सबैजना संगठित पनि रहेछन्।
५. दयनीय अवस्था
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीहरूको स्थिति दयनीय छ। महिनामा एक हजार पाउन्ड कमाउन पनि उनीहरूलाई धौ-धौ छ। उनीहरूलाई त्यति पैसाले त्यहाँको महँगो जीवनशैलीमा एकदमै गाह्रो हुन्छ। तैपनि त्यसबाट बचाएर नेपालमा रहेका परिवारलाई समेत पैसा पठाउँदा रहेछन्। यस्तो गर्नेहरूलाई मेरो सलाम छ।
६. युट्युबमा नेपाली फिल्म
विदेशमा जन्मेहुर्केका नेपाली बालबालिकाहरूले पनि कलाकार चिन्दा रहेछन्। मलाई अचम्म लाग्यो। पछि यो सब युट्युबको कमाल रहेछ। सबै केटाकेटीहरू युट्युबमा नेपाली फिल्मका दृश्यहरू हेर्दारहेछन्। त्यसपछि हामीले 'वीरताको चिनो'का गीतहरू पनि युट्युबमा राख्यौं।
बेलायतमा नेपालीहरूलाई गोर्खा भनेर चिन्दा रहेछन्। तैपनि नेपालीहरूलाई अपहेलना गरिएको मैले पाएँ। गरिब र पिछडिएको देशको नागरिक भनेर हैरान बनाउँदो रहेछ। नेपाललाई चिनाउने बेलामा पनि गरिब र फोहोर बालबालिकाका फोटो देखाएको पाएँ। बरु भारतीयहरूको इज्जत रहेछ जस्तो लाग्यो।
८. रेस्टुरेन्टमा देखाइनँ
लन्डनमा धेरैले हामीसँग रेस्टुरेन्टमा फिल्म देखाउने प्रस्ताव राखे। नेपालमा समेत रिलिज हुन बाँकी फिल्म भएकोले हामीले मानेनौं। फिल्मको इज्जत फिल्म हलमै हुन्छ। त्यसैलेर ८ सय पाउन्ड तिरेर भए पनि लन्डनको ह्यारो सफारी हलमा फिल्म देखायौं। हाम्रो फिल्मको शो हुँदा त्यो हलमा रजनीकान्तको 'रोबोट'को प्रिमियर हुँदैथियो।
९. ट्राफिक व्यवस्थित
लन्डनमा काठमाडौंमै जस्तो साँघुरा सडक देखिए। तर, ट्राफिक जाम चाहिँ थिएन। त्यसो नहुनुको कारण लेनको नियम पालना रहेछ। फरक खालका गाडीको लागि फरक लेन छुट्याइएको थियो। एउटाको लेन अर्कोले कहिल्यै मिच्दो रहेनछ। त्यस्तै जहाँ पायो त्यहीँबाट बाटो काटेको देखिन। पाँच प्रतिशतले जतिले चाहिँ त्यहाँ पनि ट्राफिकको आँखा छल्दो रहेछ।
१०. मिस्टर बिनको सुटिङ
बकिङघाम प्यालेस क्षेत्रमा मिस्टर बिनलाई देख्न पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो। करिब २ सय जनाको सुटिङ युनिट, तीनवटा मेकअप भ्यान र सातवटा क्यामेरा रहेछ। पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो। मिस्टर बिनलाई सय मिटरको दूरीबाट देख्यौं। उनी त्यहाँ 'जोनी इङलिस टु'को सुटिङमा अभिनय गर्दैथिए।